माघ लागेपछि सवारी साधन नविकरण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यस्तो आयो नयाँ नियम - Arthik Sandesh माघ लागेपछि सवारी साधन नविकरण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यस्तो आयो नयाँ नियम - Arthik Sandesh
माघ लागेपछि सवारी साधन नविकरण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यस्तो आयो नयाँ नियम
काठमाण्डौ । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी माघदेखि सवारीसाधन नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ । सबै किसिमका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै जाने योजनाअनुसार नवीकरण गरिने सवारीसाधनमा लागू गर्न लगिएको विभागका प्रवक्ता डा लोकनाथ भुषालले बताए ।
पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समय कोभिडका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट ९इम्बोस्ड नम्बर प्लेट० को कार्यान्वयन सुस्त भएको हो । विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी ९द कर्पोरेसन०सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
भाषाविद्हरुले सो नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा नै हुँदा उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन्। (रासस